အံဩဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင် မာစီဒီးကား ကို (၁)ဒေါ်လာနဲ့ရောင်း တဲ့ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက် – Zartiman
အထူးအဆန်း ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြော်ငြာတစ်ခုပါလာသည် –မာစီဒီးကား 1$ ဖြင့် ရောင်းမည်။လက်ရှိအသုံးပြုနေသော မာစီဒီးကားကို 1$ ဖြင့် ရောင်းမည်။ စိတ်ဝင်စားသူ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ဆက်သွယ်ပါ။ ဦးရာ လူရောင်းမည်။ဒေါ်… … …… … . အမှတ် (—)၊ ( —–)လမ်း ၊ ——– —–မြို့ ထိုကြော်ငြာကို တွေ့မြင်သူများက အထူးအဆန်းဖြစ်နေ သည်။ ထိုအမျိုးသမီး ရူးနေ၍သာ ကြော်ငြာထည့်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ယူဆလျက်ရှိကြသည်။
ထို့ကြောင့် မာစီဒီးကားပိုင်ရှင်ဒေါ်… … …… .ထံသို့ မည်သူမှ သွားရောက်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိကြချေ။ထို့ကြောင့် ဒေါ်…… … …… ..… ..က ထိုကြော်ငြာကို သတင်းစာများတွင် နေ့စဉ် ရက်ဆက် ထည့်သွင်းနေသည်။လူတစ်ယောက်က ထိုကြော်ငြာကို အသေအချာဖတ်ကြည့် ပြီး နောက် ဒေါ်… … …. .နှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံလေသည်။“အဒေါ် ကျွန်တော် ကားရောင်းမယ့်ကြော်ငြာတွေ့လို့ လာခဲ့တာပါ”။အေး …အခု အထိ ဘယ်သူမှ မလာကြလို့ ခဏခဏကြော်ငြာနေတာ”။“ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ…ကျနော် စိတ်ဝင်စားလို့လာခဲ့တာပါခင်ဗျာ ”။
“မင်းက တကယ်ဝယ်မှာလား”။ဝယ်မှာပါ”။“ဒါဆို…ကားကိုလိုက်ကြည့်လေ”။ဒေါ်… … …… …က ကားဂိုဒေါင်ကို ခေါ်သွားသည်။ ဂိုဒေါင် သော့ကို ဖွင့်ပြီး မာစီဒီးကားကို ပြသသည်။“မင်းကို ရောင်းမယ့်ကားက ဒီကားပဲ ”။ကားဝယ်ရန်လာသူသည် တော်တော် အံ့သြသွားသည်။ သိန်းပေါင်းများစွာ တန်သောကားဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမှာလဲဗျ”။သတင်းစာထဲမှာ ပါတယ်လေ 1$ နဲ့ရောင်းမှာ ။”“ဗျာ ” “မ…ဗျာနဲ့ အဒေါ်က တကယ်ရောင်းမှာ ၊ ဒီအတိုင်းတော့ မရောင်းဘူး။မင်းဘက်က သက်သေခေါ်ခဲ့ရမယ် ၊ ငါ့ဘက်ကလည်း သက်သေပါမယ်။
လူကြီးလူကောင်းတွေ ရှေ့မှာ စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ရောင်းမယ် ”။ဟုတ် …ဟုတ်ကဲ့ ”။ထိုသူသည် ရပ်ကွက်ထဲမှ လူကြီးလူကောင်းများကို သက် သေအဖြစ် ခေါ်လာခဲ့သည်။ ဒေါ်…… ……… … . ကလည်း လူကြီးလူကောင်းများကို အဆင်သင့်ခေါ်ထားသည်။“ဟောဒီမှာ အုံနာစာအုပ်၊ ဆီစာအုပ်နဲ့ကားသော့ ၊ မနက်ဖန် နာမည်ပြောင်းကိစ္စ အကုန်လုပ်ပေးမယ် ”။လူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့ ကားဝယ်သူတို့ဟာ ဒီမိန်းမရူးများ နေလို့လားဟု တွေးတောနေကြသည်။အဒေါ်ရယ် …ကျွန်တော် အိပ်မက်များ မက် နေတာလား”။
“အိပ်မက်မဟုတ်ပါဘူး…အဒေါ်က ဒီမာစီဒီးကားကို 1$ နဲ့ ရောင်းတာပါ၊ ဟောဒီစာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပေးကြပါ”။ကားရောင်းသူ၊ ကား ဝယ်သူနှင့် အသိသက်သေများက အသီးသီးလက်မှတ်ရေးထိုးပေးကြသည်။“ပေး…ငါ့ကို 1$”။ကားဝယ်သူက 1$ ကို ထုတ်ပေးလိုက်ပြီး နောက် ကားရောင်းသူ အဒေါ်ကြီးကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးလိုက်သည်။“ဘာကြောင့် အခုလိုတန်ဖိုးများစွာတန်တဲ့ ဒီကားကို 1$ ထဲနဲ့ ရောင်းရတာလဲ ”။“အဒေါ့်ယောက်ျားက မသေခင် မှာသွားလို့ပါ”။အဒေါ့်ယောက်ျားကို အဒေါ်က တော်တော်ချစ်လို့ပေါ့နော် ။”
“ချစ်တာလဲပါတာပေါ့ ၊ မသေခင်မှာသွားတာလေးကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးချင်လို့ပါ ”။“အဒေါ့်ယောက်ျားက ဘာများမှာသွားခဲ့လို့လဲ ခင်ဗျာ”။“အဒေါ့် ယောက်ျားက သူစီးနေကျ မာစီဒီးကားကို ရောင်းပြီး ကားရောင်းရငွေအားလုံးကို မိုးမိုးကို ပေးလိုက်ပါတဲ့ ”။ မိုးမိုးဆိုတာ က”အဒေါ်တို့အိမ်က အိမ်ဖော်ပါ။ နောက်ပြီး …”“နောက်ပြီး …ဘာလဲဗျ”။အဒေါ့်ယောက်ျားရဲ့ မယားငယ် ”။တိန်…
အံဩဖှယျရာကောငျးလောကျအောငျ မာစီဒီးကား ကို (၁)ဒျေါလာနဲ့ရောငျး တဲ့ အဒျေါကွီး တဈယောကျ
အထူးအဆနျး ဖွဈရပျတဈခုပါ။နစေ့ဉျထုတျသတငျးစာမြားတှငျ အောကျပါအတိုငျး ကွျောငွာတဈခုပါလာသညျ –မာစီဒီးကား 1$ ဖွငျ့ ရောငျးမညျ။လကျရှိအသုံးပွုနသေော မာစီဒီးကားကို 1$ ဖွငျ့ ရောငျးမညျ။ စိတျဝငျစားသူ လူကိုယျတိုငျ လာရောကျ ဆကျသှယျပါ။ ဦးရာ လူရောငျးမညျ။ဒျေါ… … …… … . အမှတျ (—)၊ ( —–)လမျး ၊ ——– —–မွို့ ထိုကွျောငွာကို တှမွေ့ငျသူမြားက အထူးအဆနျးဖွဈနေ သညျ။ ထိုအမြိုးသမီး ရူးနေ၍သာ ကွျောငွာထညျ့ခွငျးဖွဈသညျ ဟု ယူဆလကျြရှိကွသညျ။
ထို့ကွောငျ့ မာစီဒီးကားပိုငျရှငျဒျေါ… … …… .ထံသို့ မညျသူမှ သှားရောကျဆကျသှယျခွငျးမရှိကွခြေ။ထို့ကွောငျ့ ဒျေါ…… … …… ..… ..က ထိုကွျောငွာကို သတငျးစာမြားတှငျ နစေ့ဉျ ရကျဆကျ ထညျ့သှငျးနသေညျ။လူတဈယောကျက ထိုကွျောငွာကို အသအေခြာဖတျကွညျ့ ပွီး နောကျ ဒျေါ… … …. .နှငျ့ သှားရောကျတှဆေုံ့လသေညျ။“အဒျေါ ကြှနျတျော ကားရောငျးမယျ့ကွျောငွာတှလေို့ လာခဲ့တာပါ”။အေး …အခု အထိ ဘယျသူမှ မလာကွလို့ ခဏခဏကွျောငွာနတော”။“ဟုတျကဲ့ခငျဗြ…ကနြျော စိတျဝငျစားလို့လာခဲ့တာပါခငျဗြာ ”။
“မငျးက တကယျဝယျမှာလား”။ဝယျမှာပါ”။“ဒါဆို…ကားကိုလိုကျကွညျ့လေ”။ဒျေါ… … …… …က ကားဂိုဒေါငျကို ချေါသှားသညျ။ ဂိုဒေါငျ သော့ကို ဖှငျ့ပွီး မာစီဒီးကားကို ပွသသညျ။“မငျးကို ရောငျးမယျ့ကားက ဒီကားပဲ ”။ကားဝယျရနျလာသူသညျ တျောတျော အံ့သွသှားသညျ။ သိနျးပေါငျးမြားစှာ တနျသောကားဖွဈသညျ။ ဘယျလောကျနဲ့ရောငျးမှာလဲဗြ”။သတငျးစာထဲမှာ ပါတယျလေ 1$ နဲ့ရောငျးမှာ ။”“ဗြာ ” “မ…ဗြာနဲ့ အဒျေါက တကယျရောငျးမှာ ၊ ဒီအတိုငျးတော့ မရောငျးဘူး။မငျးဘကျက သကျသခေျေါခဲ့ရမယျ ၊ ငါ့ဘကျကလညျး သကျသပေါမယျ။
လူကွီးလူကောငျးတှေ ရှမှေ့ာ စာခြုပျစာတမျးနဲ့ရောငျးမယျ ”။ဟုတျ …ဟုတျကဲ့ ”။ထိုသူသညျ ရပျကှကျထဲမှ လူကွီးလူကောငျးမြားကို သကျ သအေဖွဈ ချေါလာခဲ့သညျ။ ဒျေါ…… ……… … . ကလညျး လူကွီးလူကောငျးမြားကို အဆငျသငျ့ချေါထားသညျ။“ဟောဒီမှာ အုံနာစာအုပျ၊ ဆီစာအုပျနဲ့ကားသော့ ၊ မနကျဖနျ နာမညျပွောငျးကိစ်စ အကုနျလုပျပေးမယျ ”။လူကွီးလူကောငျးတှနေဲ့ ကားဝယျသူတို့ဟာ ဒီမိနျးမရူးမြား နလေို့လားဟု တှေးတောနကွေသညျ။အဒျေါရယျ …ကြှနျတျော အိပျမကျမြား မကျ နတောလား”။
“အိပျမကျမဟုတျပါဘူး…အဒျေါက ဒီမာစီဒီးကားကို 1$ နဲ့ ရောငျးတာပါ၊ ဟောဒီစာခြုပျမှာ လကျမှတျထိုးပေးကွပါ”။ကားရောငျးသူ၊ ကား ဝယျသူနှငျ့ အသိသကျသမြေားက အသီးသီးလကျမှတျရေးထိုးပေးကွသညျ။“ပေး…ငါ့ကို 1$”။ကားဝယျသူက 1$ ကို ထုတျပေးလိုကျပွီး နောကျ ကားရောငျးသူ အဒျေါကွီးကို မေးခှနျးတဈခု မေးလိုကျသညျ။“ဘာကွောငျ့ အခုလိုတနျဖိုးမြားစှာတနျတဲ့ ဒီကားကို 1$ ထဲနဲ့ ရောငျးရတာလဲ ”။“အဒျေါ့ယောကျြားက မသခေငျ မှာသှားလို့ပါ”။အဒျေါ့ယောကျြားကို အဒျေါက တျောတျောခဈြလို့ပေါ့နျော ။”
“ခဈြတာလဲပါတာပေါ့ ၊ မသခေငျမှာသှားတာလေးကို ဖွညျ့ဆညျးဆောငျရှကျပေးခငျြလို့ပါ ”။“အဒျေါ့ယောကျြားက ဘာမြားမှာသှားခဲ့လို့လဲ ခငျဗြာ”။“အဒျေါ့ ယောကျြားက သူစီးနကြေ မာစီဒီးကားကို ရောငျးပွီး ကားရောငျးရငှအေားလုံးကို မိုးမိုးကို ပေးလိုကျပါတဲ့ ”။ မိုးမိုးဆိုတာ က”အဒျေါတို့အိမျက အိမျဖျောပါ။ နောကျပွီး …”“နောကျပွီး …ဘာလဲဗြ”။အဒျေါ့ယောကျြားရဲ့ မယားငယျ ”။တိနျ…